Baarlamaanka Puntland oo doonaya in ay jagadda madaxtinimadda ka qaadaan Gen. Cade Muuse
Puntland oo ceyrisay hayadda DRC
waxaa maalmahaan isa soo taraya dooda ka dhex taagan baarlamaanka DGPL iyo Cadde Muuse taas oo dhalisay in madaxweynu su'aalo ay weydiiyeen baarlamaanka uu ka jawaabi waayo kadibna uu amar ku bixiyay in aan dib danbe liskugu soo noqon arintan ayaa soo jiitameysay mudadaan.
Madaama magaaladda laascaano lagala wareegay maamulka puntland ayaa madaxweynaha mar walba iska dhaga tiraa wax ka qabashadeeda.
Dhanka kale qabaa'ilka ku dhaqan deegaanadda puntland ayaa samaystay gaadiidka dagaalka oo aan cidna ka amar qaadan arintan oo sababi karta amman darro.
Ayadoo waqtiga madaxweynanimada ee Cade Muuse gabaabsi yahay, kulanka baarlamnka ee axad ah muxuu keeni doonaa ayaa shacabku is weydiinayaa.
Waxaa Sabtidii laga ceeriyay magaaladda Garoowe hayad caalami ah, oo lagu edeeyay in ay ku lug laheyd afduub loo geestay wariye u dhashay france oo koox burcad ah afduubeen, madaxii hayada DRC ayaa wasaarada qorsheynta ee puntland ku amartay in uu isaga baxo puntland, arintan ayaan aheyn mid ku cusub hay'adaha samafalka ka gaysta deeganadda puntland ayadoo sanadkii aynu soo dhaafnay sidaan oo kale laga eryay magaalada gaalkacyo hay'ad samafalka aan xuduuda laheyn MSF spain taas oo kaliftay in ku dhawaad 200 oo qof shaqo la'aan ku dhacdo qaar kalena ay macluul ugu dhintaan isbitaalka weyn ee magaaladda gaalkacyo.
DRC waa hay'ad ay ka shaqeeyaan dad aad u fara badan hadii gobolada puntland laga eryo waxeey keeni kartaa, shaqo la'aan soo wajahdda dadkii shaqaalaha ka ahaa, sandiyago oo wareysi siiyay somalitalk ayaa sheegay in arintan uusan waxba kala socon amarka deg dega ah ee wasaaraddu soo saartay wuxuuna sheegay in arintan ay u baahantahay ka fiirsasho.
Magaalada bosaaso oo wadooyinkeeda qaar la xiray xiran
Waxaa Sabtidii gabi ahaanba joogsaday isu socodkii baabuurta iskaga gooshi jirtay magaaladda bosaaso wada weyn ee aada airporka ayaa xiran. ayadoo wadooyinka lagu arki karay ciidamo hubeysan, waxaa gabi ahaanba la'furay wadada isku xirta airporka bosaaso iyo gaaca taas oo ah mid ay in mudo ah ka cabanayeen dad weynaha ku dhaqan bosaaso khaasatan ganacsada.
daroowaladda ka ganacsadda tasiyadda yar yar ayaa arintan soo dhaweeyay ayagoo sheegay in gudoomiyaha cusub ay soo dhaweyn doonaan arintaana tahay arin ku dayasho mudan arintan oo kale ayaa hadda ka hor laga sameyn magaaladda bosaaso ka dib casilaadii duqii hore ee bosaaso iyo golihiisii deegaanka ay is qab qabsi badan madaxweynuhu kala eryay c/risaaq xareed ayaa waxaa loo doortay gudoomiyaha degmadda bosaaso bishaan aan ku jirno asagoo muujinaya fir fircooni.